True Star (Myanmar Translation ) - JuNo - Wattpad
True Star (Myanmar Translation )
679K Reads 79.8K Votes 93 Part Story
By JuNoXiang Ongoing - Updated Jun 28
လတ်တလော ကျွန်တော် ကြိုက်နှစ်သက်နေတဲ့ chinese bl Novel တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ True Star novel လေးကို ဘာသာပြန် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို တည်ဆောက်ထားတာဟာ သမရိုးကျ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်နဲ့ ကွဲထွက်နေပြီး ရုပ်ရှင် Industry အကြောင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်ခြင်းပညာရပ်ရဲ့ အကြောင်းကို အသေးစိတ် ပေါ်လွှင်အောင် ဖော်ညွှန်းထားတာပါတယ် ။
Title : True Star
Author : Wan Min Zhi Shang
Status :4volumes + Extras ( Approximately 450 chapters )
Original Translation : Giraffe Corps
ငွေရောင် ပိတ်ကားပြင်ရဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးလို့ တင်စားရတဲ့ Fennes Tang ဟာ နှစ်ရှည်လများ စွဲကပ်ခံစားခဲ့ရတဲ့ မွေးရာပါ နှလုံးအားနည်းရောဂါကြောင့် တစ်နေ့မှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ ပြန်လည် ရှင်သန် နိုးထလာခဲ့တယ် ။ အဲ့အချိန်မှာပဲ သူသိလိုက်ရတာက သူဟာ အရင် ခန္ဓာကိုယ် အဟောင်းနဲ့ မဟုတ်တော့ပဲ ငယ်ရွယ်ပြီး ခေတ်မမီတော့တဲ့ Idol ဟောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်နေလေတယ် ။
Ch.3 ကို့ယို့ကားယား အိပ်မက်တစ်ခု
Ch.4 တကယ်ကို ကို့ယို့ကားယား နိုင်တာပဲ
Ch.5အပေးအယူအသစ် (Part 1)
Ch.6အပေးအယူအသစ် (Part - 2)
Ch.7 Charles ( Part 1 )
Ch.8 Charles (Part 2)
Ch.9 Charles (Part 3)
Ch.10 Lu Tian Chen (Part 1)
Ch.11 Lu Tian Chen (Part 2)
Ch.12 Ge Chen
Ch.14 Getting Along
Ch.23 Truly Angelic
Ch. 24 Laying Your Cards
Ch.25 Auditions ( Part 1)
Ch.26 Auditions ( Part 2)
Ch.27 Meeting an " Old Friend "
Ch.28 Kissing Test ( Part 1)
Ch. 29 Kissing Test (Part 2)
Ch.30 Who Would Want To Ride With U ( Part 1)
Ch.31 Who Would Want To Ride With U ( Part 2)
Ch.32 Disaster Of Three
Ch.33 Dream Lover ( Part 1 )
Ch.34 Dream Lover (Part 2)
Ch.35 Not Kindhearted (Part.1)
Ch.36 Not Kindhearted ( Part.2)
Ch.37 Honest Thoughts (Part.1)
Ch.38 Honest Thoughts (Part.2)
Ch.39 Chen Ming Xu
Ch.40 Emotionally Moved
Ch.41 The First Scene (Part.1)
Ch.42 The First Scene (Part.2)
Ch.43 The First Scene (Part.3)
Ch.44 : Hello , President Lu ( Part.1 )
Ch.45 : Hello, President Lu ( Part.2)
Ch.46 : Hello, President Lu ( Part.3)
Ch.47 : Kai's Invitation
Ch.48 : Eat You Up ( Part.1 )
Ch.49 : Eat You Up ( Part.2)
Ch.50 : Eat You Up ( Part.3 )
Ch.51 : Envy ( Part.1 )
Ch.52 : Envy ( Part.2 )
Ch.53 : Checking in at the Lu's House ( Part.1)
Ch.54 : Checking in at the Lu's house ( Part.2 )
Ch.55 : Applying Medicine ( Part.1 )
Ch.56 : Applying Medicine ( Part.2 )
Ch.57 : New Flame
Ch.58 : Going to work with The President
Ch.59: A Table for Four ( Part.1 )
Ch.60 : A Table for Four ( Part.2 )
Ch.61 : Curses and Harsh Words
Ch.62: The Trees Long For Peace , But The Wind Will Never Cease ( Part.1 )
Ch.63 : The Trees Long For Peace , But The Wind Will Never Cease ( Part.2 )
Ch.64 : True Star Training Class
Ch.65 : CallingaTrue Star ( Part.1 )
Ch.66 : CallingaTrue Star ( Part.2 )
Ch.67 : Making Headlines
Ch.68: He and Him in the Dance Studio ( 1 )
Ch.69 : He and Him in the Dance Studio (2)
Ch.70 : The Acting Class's Exam Question
Ch.71 : Dream Lover (3)
Ch.72 : Dream Lover (4)
Ch.73 : Dream Lover (5)
Ch.74 : An Unexpected Choice
Ch.75 : Only the Beginning
Not new chapter....
Ch.76 : Heated discussion
Ch.77 : Music Lesson (Part.1)
Ch.78 : Music Lesson (Part 2)
Ch.79: Falling Offahorse
Ch.80: Smeared Image
Ch.81: Kiss Kiss (Part-1)
Ch:82 Kiss Kiss (Part-2)
Ch.84 : Remember to Line Up (Part-1)
Ch.85: Remember to line up (Part 2+3)
Ch.87: Heading to America
Ch.88 : He Was Back
Ch.89 : I Paid the Bill
Ch.90 : Collaboration
Ch.91 : Chatting over Coffee (1)
Ch.92 : Chatting over Coffee (2)
Ch.93 : Albert (1)
Get notified when True Star (Myanmar Translation ) is updated
ချစ်​​သောမှို​လေး HDS - Arc5 [မြန်​မာဘာသာပြန်...
4.4K 645 46
【ရှင် ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းမသေရပါစေနဲ့ ...!】
သို့နှင့်၊ ရှန့်ခယ်တစ်ယောက် ဘယ်တော့မှ အဆုံးမသတ်နိုင်သည့် သနားစရာ အသက်ဘဝကို တစ်ချိန်လုံး စွန့်ပစ်စွန့်လွှတ်နေရသော သံသရာထဲ (အတင်းအကြပ်စေခိုင်းသဖြင့်) ကျင်လည်ရတော့သည်။
3.7K 589 14
MCက ကျွန်​​တော်​ပါ ​ရှောင်​ကျွင်း
ကျွန်​​တော်​က Systemတစ်​ခုနဲ့ ဆက်​နွယ်​မိတယ်​
သူ့ကို ကျွန်​​တော်​က ​ရှောင်​​ပေါင်​ဇီ(​ကိတ်​မုန့်​လုံး​လေး)လို့​နာမည်​​ပေးထားတယ်​ ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ အရင်​ဘဝက အ​ကောင်းကြီးမဟုတ်​ခဲ့ပါဘူး
ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ အသက်​​မွေးဝမ်း​ကြောင်းအလုပ်​က သရုပ်​​ဆောင်​တာရယ်​ အချိန်​ပိုင်း​မော်​ဒယ်​ လုပ်​ရတာ​တွေပဲ
ကျွန်​​တော့်​​နောက်​ကို ​လိုက်​ပြီး ခြားနားတဲ့ကမ္ဘာမျိုးစုံမှာ ကျွန်​​တော့်​​ယောက်ျားကိုရှာပြီး ​ပျော်​​ပျော်​ရွှင်​ရွှင်​​နေထိုင်​သွားကြတာကို ကြည့်​ကြပါ
⚠⚠⚠This is not owncreation.
This is Myanmar Translation.
Original Title- System Xiao Bao Xi
True Star Volume _2 (Myanmar Translation)
62.5K 14.6K 1K
original novel- True Star
original author- Wan Mie Zhi Shang
Shane ဖတ်ဖို့ ဒီ Novel ကို ဘာသာပြန်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
( Volume 1 ကို မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေ အတွက် ဆက်စပ်ဖြစ်အောင် အကျဉ်းကို ဖော်ပြပါ့မယ်။
Tang Feng က True Star Training Class နဲ့ Dream Lover ဆိုတဲ့အစီစဉ် ၂ ခု အပြီးမှာ အမေရိကားက နာမည်ကြီး ဟောလီးဝုဒ် သရုပ်ဆောင် Gino နဲ့တွဲပြီး Satan's Alley ဆိုတဲ့ Boy love movie ကို သရုပ်ဆောင်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၄၀ အရွယ်မှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ နာမည်ကြီးဟောလီးဝုဒ်မင်းသာ Fiennes Tang က တရုတ်ပြည်က သရုပ်ဆောင်သစ်လေး Tang Feng ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာ ပြန်လည်ဝင်စားခဲ့ပြီးနောက် အခက်ခဲအမျိုးမျိုးကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့၇တယ်။ Ge Chan ဆိုတဲ့ နတ်သားလေးအယောင်ဆောင် ပြိုင်ဖက်ရဲ့ အကောက်ကြုံမှုကြောင့် ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ ဘေးကနေ သီသီလေး လွတ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး သူ့အတွက် ရည်စူးထားတဲ့ဇာတ်ကားကို သူ ဘယ်လို အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကို ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။)
3.9K 645 49
The white fox(complete )
16.4K 1.7K 11
စိတ်​ကူးယဉ်​ကြည့်​တာပါ... ​မြေ​ခွေးဖြူ နဲ့ပတ်​သက်​တဲ့ drama​တွေကြည့်​ပြီး.. ​ရေးချင်​လာလို့ အပိုင်းက သိပ်​မရှည်​​လောက်​ဘူးရယ်​
You, Me and The Universe (Myanmar Translaton)
90.3K 13.4K 1.3K
လင်းရှောင် ဟာ မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် မမျှော်လင့်ပဲ သေဆုံးခဲ့ရတယ်။
ပြီးတော့ system တစ်ခုထဲမှာ
Host ကလည်း ရိုးရှင်းတယ်။
သူကလည်း ရိုးရှင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲ။
ဒါဆို ရင် .......
ဘာကြောင့်များ လှပတဲ့ ခြေထောက်တွေနဲ့ သူ့ကို မျှော့တစ်ကောင်လို့ အတင်းအကျပ်ကပ်တွယ်နေပါလိမ့်။
မကြာခင်ကမှ ခွင့်ပြုချက်ရထားတဲ့ novel လေးပါ။
System ကနေ ဟိုဘဝပို့ ဒီဘဝပို့ လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလေး။ FoD လိုမျိုး။ ongoing လေး..။
ကြာမည် လာမည် မျှော် ဆိုတာမျိုးပေါ့ ...??
All credit to original author and editors. Translated by their permission.
credit to cv photo creater.
I think you'd like this story: "You, Me and The Universe" by PerfectChaos_Cleo on Wattpad https://my.w.tt/ovI0sHt81O
161K 25.9K 2.1K
ကျိူးယွင်​ရှန့်​ဆိုတာသိပ္ပံ​ခေတ်​က hacker တစ်​​ယောက်​။သူက ဘဝရာ​ထောင်​ချီဗီလိန်​အဖြစ်​ပြန်​လည်​​မွေးဖွားဖို့ Lord God ရဲ့​ရွေးချယ်​ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်​။ မတူညီတဲ့ဘဝရာ​ထောင်​ချီ၊ အဓိပ္ပာယ်​မရှိတဲ့ ညွှန်​ကြားချက်​တွေအတိုင်းလုပ်​ရင်းနဲ့ protagonist(အဓိကဇာတ်​လိုက်​)ရဲ့သတ်​ဖြတ်​ခြင်းကို အကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရတယ်​။ ​နောက်​ဆုံးမှာ​တော့ဗီလိန်​အဖြစ်​​သေဆုံးရမယ့်​ဘဝက​နေကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုလွတ်​​မြောက်​​စေခဲ့ပြီး ရရှိလာတဲ့ဘဝတိုင်းကိုသူကိုယ်​တိုင်​ထိန်းချူပ်​​တော့တယ်​။ နာကျည်းခြင်း၊ မုန်းတီးခြင်း၊ စက်​ဆုပ်​ရွံရှာခြင်း​တွေနဲ့သာ အသားကျ​နေတဲ့ ကျိူးယွင်​ရှန့်​တစ်ယောက် အချစ်​စစ်ကို​ရောရှာ​တွေ့ နိုင်​ပါ့မလား?
Burmese title - '' အမှောင်ထဲက ''
Arc Title - "Arc-9, End of the World Duplication"
အချစ်​ဂိမ်း (Myanmar Translation)
39.6K 5.8K 738
သူရဲ့ ​နောက်​ဆုံး​နေဝင်​ချိန်​အထိ မင်းတစ်​​ယောက်​ထဲကိုပဲ ဂရုစိုက်​သွား​အောင်​ လုပ်​ရုံပါပဲ
မင်းဘယ်​​လောက်​ ​ကောင်း​ကောင်းကစားနိုင်​လဲ ကြည့်​ကြရ​အောင်​....
Warning!! This story contains adult content that is unsuitable for children.
Living to Suffer (Myanmar Translation)
2.9K 246 17
'Till death do us apart' -[သေခြင်းခွဲသည့်တိုင်] ဟူသော ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ဖူးပါသလား။ ထိုဇာတ်လမ်းကလေးမည်သို့ ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း (သို့) ထိုဇာတ်လမ်းမတိုင်မီက မည်သို့ပါနည်းဟု မေးလာပါလျှင်...............
'Living to suffer' -[ ရှင်ကျန်ရသည်လည်း ဆင်းရဲ] ပါပေ၏။
Translator: ayszhang ( ays.zhang@gmail.com)
Translated by permission of the original translator, ayszhang.
Credit to cv photo creator.
Chasing You (Myanmar Translation)
Title - Chasing You
Original Author - YuiFreymore
All credit to her and also credit to cv photo creater.